Ciidamada Amaanka ee dalka Kenya oo heegan buuxa la galiyay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaCiidamada Amaanka ee dalka Kenya oo heegan buuxa la galiyay
Hiiraan Xog, Ciidamada dalka Kenya ayaa heegan sare la geliyey, kaddib markii sirdoonka dalkaasi heleen xog muujinaysa weerar xooggan oo Ururka Al shabaab qorsheynayo in uu ka fuliyo deegaanno dhaca xadka kala qaybiya dalalka Kenya iyo Soomaaliya.
Afhayeenka Booliska Kenya Charles Owino oo warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi, wuxuu sheegay in laga warhelay mileeshiyaad tira badan oo ka tirsan Al shabaab, kuwaas oo isku urursanaya deegaanka Ceelcadde ee gobolka Gedo.
“Hay’adaha ammaanku waxay sidoo kale heegan ugu jiraan weerar ay suuragal tahay in mileeshiyada Al shabaab la beegsato xarumaha ammaanka iyo hadafyada jilicsan ee ku dherersan xadka ay wadaagaan Mandheera iyo Ceelwaaq” Owino ayaa sidaas yiri.
Afhayeenka Booliska Kenya ayaa sidoo kale sheegay in labadii asbuuc ee u dambeeyey dagaalyahannada Al shabaab usoo dhowaanayeen dhinaca xuduudka, isagoo xusay in lagu arkay deegaanno ay kamid yihiin Hola, Dura, Jidahaley, Juma iyo Ilkabere.
Hay’adda caalamiga ah ee ka faalloota xasaradaha ICG, ayaa warbixin ay bishii September ee lasoo dhaafay soo saartay waxay ku sheegtay, in shan sano kaddib weerarkii Westgate Mall, Al shabaab ay weli halis weyn ku tahay ammaanka iyo xasilloonida dalka Kenya.
Ku dhowaad toban weerar ayey Al shabaab ka fulisay gudaha Kenya afartii bilood ee u dambeeyey, weerarradaas oo badankooda lala beegsaday askar ka tirsan booliska iyo milateriga dalka Kenya.